ကျ​နော်​သာ ​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည်​ ​နေရာမှာဆိုရင်​ ( သို့မဟုတ်​ )ပရိဿတ်​ အာရုံ ထဲမ​ရောက်​တဲ့ မင်းသား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ကျ​နော်​သာ ​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည်​ ​နေရာမှာဆိုရင်​ ( သို့မဟုတ်​ )ပရိဿတ်​ အာရုံ ထဲမ​ရောက်​တဲ့ မင်းသား	9
ကျ​နော်​သာ ​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည်​ ​နေရာမှာဆိုရင်​ ( သို့မဟုတ်​ )ပရိဿတ်​ အာရုံ ထဲမ​ရောက်​တဲ့ မင်းသား
Posted by naywoon ni on Mar 12, 2016 in Creative Writing, My Dear Diary |9comments
ကျ​နော်​သာ ​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည်​ ​နေရာမှာဆိုရင်​ ( သို့မဟုတ်​ )ပရိဿတ်​ အာရုံ ထဲမ​ရောက်​တဲ့ မင်းသား ​ခေါင်းစဉ်​က​လေးပြီး လက်​က တွန့်​ဆုတ်​ တွန့်​ဆုတ်​ဖြစ်​​နေတာ ။ ​ရေး​ကော ​ရေးသင့်​ရဲ့လား ​ပေါ့ ။ ​ခေါင်းစဉ်​ ​ပေးထားပြီး နှုတ်​ပက်​​လေး ဖွင့်​လိုက်​ ပြန်​ပိတ်​လိုက်​ ။ စာဖတ်​​နေလည်း ခဏပဲ ။ ဂိမ်း​ဆော့ ​နေလိုက်​ ခဏပဲ အာရုံစုစည်းလို့ မရ ဘူး ။ ခုရက်​ပိုင်း သမ္မတ ​ရွေးချယ်​တာ နဲ့ ပတ်​သက်​ပြီး ကျ​နော်​​ပြောချင်​လွန်းလို့ပါ ။ ခု ဒုတိယ သမ္မတ နှစ်​​ယောက်​​ရွေးချယ်​ပြီးခဲ့ပြီ ။ အားလုံးက ပြည်​သူ့လွှတ်​​တော်​က တင်​တဲ့ ဒုတိယ သမ္မတ ကိုပဲ အာရုံထဲမှာထား ။ Facebook ထဲမှာ ​ရှောင်​မလွတ်​ ။ သို့​ပမယ့်​ ကျ​နော်​ သွားစိတ်​၀င်​စားတာက အမျိုးသား လွှတ်​​တော်​က တင်​တဲ့ ဒုတိယ သမ္မတ ကိုစိတ်​၀င်​စားတာ ။ ဘာလို့လဲ ဆို​တော့ ဦးထင်​​ကျော်​ဆိုတာက စီးပွား​ရေး မဟာဘွဲ့ရ ​အောက်​စဖို့ဒ်​ တက္ကသိုလ်​ထိ ​ရောက်​ဖူးတဲ့သူ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်​ရဲ့သား ။ ဘာမှ အပြစ်​​ပြောစရာမရှိ ဒါ​ကြောင့်​ သူ့ ဂုဏ်​ပုဒ်​​တွေ ​လျှောက်​​ပြော​နေ ​ရေး​နေရင်​ သူ့​လောက်​မတတ်​တဲ့ သူ​တွေဘက်​က အမြင်​ကတ်​ခံရဖို့ဘဲရှိ​တော့တာ ။ အမျိုးသား လွှတ်​​တော်​ဘက်​က တင်​တဲ့ ဦးဟင်​နရီ ဆိုတာက​တော့ လူသိသိပ်​နဲလွန်းသူ ။ ​ရွေးချယ်​ပွဲမတိုင်​ခင်​ မီဒီယာ​တွေရဲ့ ထင်​​ကြေးမခံခဲ့ရသူ ( ထင်​​ကြေးအ​ပေးခံရဖို့မ​ပြောနဲ့ သူ့နာမယ်​ကို​တောင်​ ၁၀ ရက်​​နေ့ကမှစကြားဖူးသူ​တွေမရှား ) တိုင်းရင်းသားကို ဒုသမ္မတ တင်​မယ်​ဆို​ပေမဲ့ လုံးဝ ထင်​မှတ်​မထားတဲ့သူ ဆို​တော့ကာ ​နေ၀န်းနီ တစ်​​ယောက်​ အ​တွေး​တွေက ​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည်​ ဆီကို ချည်းကပ်​ပြီး “ငါဆို ဘယ်​​တွေးမလဲ ဘယ်​လိုလုပ်​မလဲ ” ဆိုတာ နဲနဲ ဆ ဝါး ကြည့်​လိုက်​​တော့ လားလား ​နေ၀န်းနီ အ​တွေးအတိုင်းသာဆိုရင်​ …………
( ​အောက်​​ဖော်​ပြပါ အ​တွေးများဟာ ​နေ၀န်းနီသာ ​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည်​​နေရာမှာ ဆိုရင်​ ဒီလို​တွေးပြီး ဒီလိုလုပ်​ခဲ့မှာပဲ ဆိုတဲ့​နေ၀န်းနီ အ​တွေးများသာဖြစ်​ပြီး ကာယကံရှင်​များနဲ့ မည်​သို့မှမသက်​ဆိုင်​ပါ​ကြောင်း )
​စော​စောပိုင်းကတည်းက ​နေ၀န်းနီ စိတ်​ထဲ ခိုးလို့ခုလု ။ NLD ရဲ့ သမ္မတ​လောင်းကို မီဒီယာ​တွေက သိချင်​ ပါတီက ​ရေငုံနှုတ်​ပိတ်​ ။ ​ပြော​ရေး ဆိုခွင့်​ရသူ​တွေဆီကလည်း တစ်​စွန်းတစ်​စ မှမထွက်​ ။ မီဒီယာ​တွေနဲ့​တောင်​ ဒီကိစ္စ စကားများကြ ။ ​ပြော​ရေးဆိုခွင့်​ ပြန်​ရုတ်​သိမ်း ။ ဆို​တော့က စကတည်းက အမျိုးသား လွှတ်​​တော်​က တင်​မဲ့ ဒုတိယ သမ္မတ ကိုရာထားပြီးသား ။ သူ့အတွက်​ ​ရေငုံနှုတ်​ပိတ်​ လျှို့ဝှက်​လာခဲ့တာပဲ လို့ ​တွေးမိတယ်​ ။ ဒီဘက်​ကို အာရုံ​ရောက်​သွား​အောင်​ ​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည်​ကို သမ္မတ ဖြစ်​​ရေး ၅၉(စ) ရပ်​တန့်​ဖို့ လုပ်​​နေတာက ဟန်​ပြသက်​သက်​ ။ ဒီကာချုပ်​လက်​ထက်​ ဒီအ​ခြေခံဥပ​ဒေ ပြင်​မ​ပေးနိုင်​ဘူးဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသား ။ ဥပ​ဒေ ကို ဒီအစိုးရ သက်​တမ်းမှာ ပြင်​မှာစိုးလို့ ကာချုပ်​က သူ့သက်​တမ်းကို​တောင်​​နောက်​ထပ်​ ၅ နှစ်​ထပ်​တိုးခဲ့​သေးတာ ။ ပထမ ဒုတိယ သမ္မတ ​ရွေးချယ်​ဖို့ မတ်​လ ၁၇ ရက်​​နေ့ကို ​ကြေငြာခဲ့တယ်​ ။ ​နောက်​ ခန့်​မှန်​တွက်​ချက်​မှု​တွေ ပြင်းထန်​လာပြီး အမှန်​နဲ့ နီးစပ်​လာ​တော့ (၁၀) ရက်​​နေ့ဆိုပြီး​ရှေ့တိုးလိုက်​တယ်​ ။ ဘာလို့လဲဆို​တော့ မီဒီယာ​တွေက သတင်းနှိုက်​မရ​တော့ သူတို့အထင်​​တွေ ​လျှောက်​​ရေးကုန်​ရင်​ ရှင်းမရ​အောင်​ရှုပ်​ကုန်​မှာစိုးတာလည်းပါပြီး ကိုယ့်​ လျှို့ဝှက်​ချက်​ကိုလည်း ပြန်​လည်းထမ်းသိမ်းရတာ ခက်​လာပုံရပါတယ်​ ။ ဘာလို့ လျှို့ဝှက်​ထားရသလဲ ။ ဟဲဟဲ မသိ​စေချင်​လို့​ပေါ့ဗျ ။ ချင်းလူမျိုး ဦး ဟင်​နရီက ခရစ်​ယာန်​ ။ စစ်​မှုထမ်းဖူးသူ ။ ​တွေ့ရသ​လောက်​ ကိုယ်​​ရေးအကျဉ်းမှာ တပ်​မ​တော်​ ရာထူး အဆင့်​​ဖော်​ပြမထား ။ သိ​တော်​မူတဲ့အတိုင်း မြန်​မာပြည်​က ဘာသာ​ရေးနဲ့ပတ်​သက်​ရင်​ ထိလွယ်​ရှလွယ်​ ။ ဒါကတစ်​ဘက်​ ။ ​နောက်​ တပ်​မ​တော်​က ဗိုလ်​ချုပ်​ကြီး​တွေ​လောက်​သာ ​မျှော်​လင့်​ထားတဲ့​နေရာ ဒုသမ္မတ ။ ဦးဟင်​နရီက အရာရှိငယ်​ ​လောက်​ပဲ ရှိနိုင်​တယ်​ ။ ဆို​တော့ကာ လျှို့ဝှက်​မထားလို့မဖြစ်​နိင်​ဘူး ။ ​ပေါက်​ကြားသွားမယ်​ဆိုရင်​ ဘာသာ​ရေးအစွန်း​ရောက်​​တွေက​ရော တပ်​မ​တော်​ဘက်​ကပါ ကန့်​ကွက်​​တော့မှာ ဒီမှာမလိုလားအပ်​တာ​တွေ​ပေါ်လာမယ်​ ။ ဒီ​နေရာမှာ သမ္မတ ​ရွေးချယ်​ပွဲ​ကြေငြာထားတဲ့ ရက်​​ရောက်​​အောင်​ ဘာနဲ့ အချိန်​ဆွဲမလဲ ။ အာလုံးလိုလားတဲ့ တပ်​ဘက်​ကလည်း ပြင်​မ​ပေးနိုင်​တဲ့ ၅၉(စ) နဲ့ အာရုံ​ပြောင်း​ပေးလိုက်​တာပဲ ။ ဒါဖြင့်​ ဘာလို့ ဦးဟင်​နရီ ကို ​ရွေးလဲ ။ သမ္မတ လုပ်​နိုင်​မဲ့ အရည်​အချင်းရှိလို့ ။ ချင်းတိုင်းရင်းသားဖြစ်​လို့ ။ တိုင်းရင်းသား​တွေကို​ပြောချင်​တာက ဗမာလူမျိုးမှမဟုတ်​ဘူး ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်​မှ မဟုတ်​ဘူး ။ လူနည်းစု ချင်းတိုင်းရင်းသားထဲကလည်း အရည်​အချင်းရှိရင်​ NLD နဲ့ လက်​တွဲမယ်​ဆိုရင်​ သမ္မတ ဖြစ်​နိုင်​တယ်​ ။ ​နောက်​တပ်​မ​တော်​သား​တွေကို ဆက်​​ပြောတယ်​ ။ မြင်​လား သမ္မတ ဖြစ်​ဖို့ ဗိုလ်​ချုပ်​ဖြစ်​စရာမလိုဘူး ။ အရည်​အချင်းရှိရင်​ NLD နဲ့ လက်​တွဲမယ်​ဆိုရင်​ သမ္မတ ဖြစ်​နိုင်​တယ်​ ။
ကျုပ်​​တော့ ဒီလိုပဲ ​တွေးလို့ရတယ်​ ။ ဒီပွဲမှာ အဓိက ဇာတ်​လိုက်​က ဦးထင်​​ကျော်​မဟုတ်​ဘူး ။ ဦးဟင်​နရီ ​ဗန်​​ဆေးယူ ……. ပါလို့ ။ ​နေ၀န်းနီ
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ဒါကတော့ ဥနီရဲ့ အမြင်ပေါ့
ထင်ကြေးစုံ အမြင်စုံ ရှိခွင့်ရှိပါတယ်
အဖြေမှန်ကတော့ ဘွားဒေါ် ဆီမှာပဲ ရှိလေသည်ပေါ့ ဥနီရယ်
သေချာဒါကဒေါ့ ဘွားဒေါ်ရဲ့ အကွက်တွေထဲ
အကုန် ချာလပတ် ရမ်းခဲ့ကြလေသည်ပေါ့ ဗျာ
hmee says: ၅၉ (စ)နဲ့ ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်ကြီး အလုပ်ရှုပ်သွားတယ်။ သူ့ ဥာဏ်လောက်နဲ့များ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဃှဉ်ချင်သေးတယ်။ ဓကားခနဲပဲ :D
kai says: အမေရိက နိုင်ငံရေးကို ကိုယ်တွယ်ထိမ်းကြောင်းထားတာ.. ဂျူးတွေ..။
စီးပွားရေးလောကကို.. အုပ်စီးထားတာ ဂျူးတွေ..။
တတ်သိပညာရှင်.. ထိပ်တန်းရှေ့နေတွေဆိုလည်း.. ဂျူး…။
အိုင်စတိုင်းလည်း ဂျူး..။ ဖေ့စ်ဘုတ်စီအီးအိုလည်း ဂျူး…။ အမေရိက ဒုသမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင်လည်းဂျူး..။
အစ္စရေးက.. သူတို့ရဲ့ပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ မျိုးနွယ်စုဆိုပြီး ချင်းတွေထောင်ချီကို.. အစ္စရေးမှာနေရာချထားပေးဖူးတယ်..။
တကယ်တော့ ချင်းအများစုဟာ.. ခရစ်ယန်တွေပါ…။ ဂျူးဘာသာမပြောင်းကြသေးပါဘူး…။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ခရစ်ယန်ချင်းကြီး မြန်မာဒုသမ္မတဖြစ်လာတာ.. အကောင်းဖက်များတယ်လို့သာ… ထင်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: kai says:
အမေရိက နိုင်ငံရေးကို ကိုယ်တွယ်ထိမ်းကြောင်းထားတာ.. ဂျူးတွေ..။
မြန်​မာပြည်​နဲ့​တော့ ​ပြောင်းပြန်​ ​ပြောရမှာ​တောင်​ ရှက်​စရာ သို့​ပေမဲ့ ​ငွေ​​ရောင်​ပိတ်​ကား​ပေါ်မှာ မထင်​မှတ်​တာ​တွေ မ​မျှော်​လင့်​တာ​တွေ မကြုံဖူးတာ​တွေ ​တွေ့ရ ကြုံရ ကြားရ မြင်​ရ ဦးမည့်​ ငါးနှစ်​တာ ၂၁ ရာစု ၅ နှစ်​ရာသီ ဗမာပြည်​ မှာ​လေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: ပိတ်ကားထက်မှာ ဆက်လက်ရှုစားတာပဲကောင်းပါတယ်။
ကိုယ် ညာဏ်မှီတဲ့ ကိစ္စတွေမဟုတ်တော့။
Ma Ma says: ဦးထင်ကျော်ကို ဒု-သမ္မတ ရွေးပြီး ဦးထင်ကျော်ရဲ့ Biography တွေ ဖတ်ရတဲ့အခါမှာ………..
ဒေါ်စုလို နောက်တစ်ယောက် မရှိနိုင်ဘူးလို့ ပြောနေကြတာတွေကြောင့် စိတ်ပူနေတာတွေ လျော့ပါးသွားတယ်။
အခုလည်း အဘနီရဲ့ အတွေးကို ဖတ်ရတော့…………..
Thint Aye Yeik says: လိုက်လို့ မမှီတဲ့ အမေစုရဲ့ ပညာခန်းများကို
တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ မြင်တွေ့ခွင့် ရလေပြီ။
.ဒေါ်စု ခေတ်မှာ လူ ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းလည်း
ကိုယ့်သမိုင်းထဲ ဂုဏ်ယူစွာ ထည့်ရေးနိုင်ပြီ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: အင်းး ဘနီရေးတာ ကြောင်းကျိုးကိုက်တယ်။ အများကြီးကို တွေးနေတာကိုး
naywoon ni says: ဟုတ်​တယ်​ဗျ ကျ​နော်​ ၀တ္ထု တစ်​ပုဒ်​​လောက်​​ရေးမလို့ အဲ့လို လူတစ်​​ယောက်​ချင်းစီရဲ့ အ​တွေးကို လိုက်​ပြီး ​တွေးကြည့်​​နေတာ သို့​ပေမဲ့ သူမကို​တော့ လက်​​မြှောက်​ထားရ ခုလည်း ကြည့်​​လေ ၀န်​ကြီးဌာန ​လေးခုကို သူတစ်​​ယောက်​ထဲကိုင်​မယ်​လို သစ်​ထူးလွင်​က တက်​လာပြီ ။ အံ့သြစရာမရှိပါဘူး ။ ရှိသမျှဝန်​ကြီးဌာန သူတစ်​​ယောက်​ထဲ ကိုင်​မယ်​ဆိုလည်း တိုင်းပြည်​က လိုလိုလားလား လက်​ခံမှာပဲကို Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.